Soomaali ku jirto heshiiska Australia uu Mareykanka la gashay oo u ogolaanaya dib u dejinta Qaxootiga | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Soomaali ku jirto heshiiska Australia uu Mareykanka la gashay oo u ogolaanaya...
Soomaali ku jirto heshiiska Australia uu Mareykanka la gashay oo u ogolaanaya dib u dejinta Qaxootiga
Dowladda Australia ayaa dib usoo cusbooneysiisay heshiis dalkaas looga qaadayo Qaxooti doonaya in ay degenaashiyo ka helaan dalka Mareykanka oo kasoo kala jeeda dalal kala duwan oo caalamka ah.
Australia ayaa dhaqaale ku siiso waddamada deriska ah iyo kuwa ka fog sidii ay u heyn lahaayeen qaxootiga kooban ee galay dalkaas si aysan uga hortagto qul-qulkooda haddii ay xadidi weyso bilawga dhaq dhaqaaqooda.
Mas’uul katirsan Dowladda Australia ayaa Warbaahinta u sheegay in uu dib u dhaqan galay heshiiskii ay la galeen Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo dhigayay in uu qaabilo qaxooti gaaraya 1,100 ruux.
Go’aankaas fulintiisa waxaa qayb ka mid ah baajiyay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in tallaabadaas ay ka dhigneed heshiis lagu wiiqayo awoodda dalkiisa ee dhanka Soogalootiga.
Sanadkii 2016-kii, kahor inta uusan xafiiska baneen Obama waxa uu saxiixay heshiiskaan dhigaya in la qaado dadka intaas la eg, isla markaana Mareykanka uu siiyo degenaashiyo si ay u rumowdo riyada dadkaas.
Waddamada ay kasoo kala jeedaan waa Soomaaliya, Bangladesh & Myanmar, waxaana diiday qaabiliddooda Dowladda Australia oo markii dambe go’aansatay in ay dhaqaale ku bixiso sidii ay isaga masaafurin lahayd.
Bishii Oktoobar 2017-kii, ku dhawaad 250 kamid ah dadka lagu heshiiyay in la geeyo Mareykanka ayaa la siiyay ogolaansho KMG ah sida uu xaqiijiyay Marc Ablong Xoghayaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo la hadlay Senatarada Australia.
Dhaqangalka heshiiskaan ayuu qorshuhu yahay bilaha ugu horeeyo sanadka 2021-ka gaar ahaan Maarso & Abriil, waxaana dadkaan lagu hayaa Jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru oo xukuumadda Canberra lacag ku siisay dejinta Xeryo ay ka warqabto oo lagu hayo dadkaas.
2013-kii, Australia waxa ay is hortaag ku sameysay Dad magangalyo doon ah oo dalkeeda u socday, wixii xiligaas ka dambeeyay waxa ay adkeysay dhammaan ilaha looga soo gudbo si aysan u noqon waddamada qaar Yurub oo qadyaan ka taagan qulqulka tahriibayaasha.
Mareykanka qudhiisa ayaa doonaya in uu sameeyo barnaamij dib u dajin ah oo uu xeryo uga dhisayo wadanka Costa Rica ee dhaca bartamaha Ameerika, halka Trump bishii lasoo dhaafay dajiyay qorshe ah in Mareykanka 2021-ka qaato 300,000 qaxooti ah.
Xigasho: Star Tribune